Condo for Sale in Botahtaung - Yangon Region | iMyanmarHouse.com
Condos for Sale in Botahtaung
Mahar Nawarat Condo Fully Decorated For Sale
လမ်း 50 နှင့် မဟာဗန္ဓုလလမ်းမ ပေါ်တွင်တည်ရှိပြီး မဟာဗန္ဓုလလမ်း နှင့်ကုန်သည်...
3,100 Lakh (Kyats)
Ad Number S-9930640
ဗိုလ္တေထာင္ လမ္း 50 အနီး ကားပါကင္ပါ ကြန္ဒိုအခန္းေရာင္းမည္
Ad Number S-10029412
CodeA36a #Groundfloor_For_Sale ground floor.ဗိုလ် အောင်ကျော်လမ်း မြေညီထပ်....ရောင်းမည် 6000သိန်းညှိနှိုင်း .BoAungKyaw street..upper block..corner...
Ad Number S-10026333
Shwe Htake Tann Real Estate Agency Close
2,350 Lakh (Kyats)
Ad Number S-10023626
Yangon Real Estate Services Close
ဗိုလ္တေထာင္ 51 လမ္းတြင္ ကြန္ဒိုအခန္းေရာင္းမည္
2,850 Lakh (Kyats)
Ad Number S-10020591
ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် ဗိုလ်မြတ်ထွန်းတာဝါ အလွှာမြင့် ကွန်ဒိုအရောင်းခန်း။
Ad Number S-10018165
လဝန်းရှင် အိမ်ခြံမြေ ဝန်ဆောင်မူလုပ်ငန်း Close
09 444 33 77 03
Ad Number S-10014026
ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊Condoအရောင်း၊Time Square Condo .
Ad Number S-10013860
Ad Number S-10012850
840 Lakh (Kyats)
Ad Number S-10008659
Mori Mori Real Estate Close
ဗိုလ်တထောင် (၅၁)လမ်း ကွန်ဒိုအရောင်း
Ad Number S-10007086
Shwe Bon San Princess Estate Myanmar Close